Caalamka page pageno
Axad 15 December 2019
Mareykanka: Waxaa suurta-gal ah in 1,000 qof lagu dilay Iran
Sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa sheegay in ciidamada Iran ay suurta-gal tahay inay dileen in ka badan 1,000 qof, intii lagu guda jiray dibad-baxyo socday saddex toddobaad oo ka dhashay sare u qaadis deg deg ah oo ay dowladda ku sameysay qiimaha shidaalka.
Israel oo 'rajeyneysa' in Corbyn looga adkaado doorashada UK
Wasiirka arrimaha dibedda Israel ayaa maanta sheegay inuu rajeynayo in Jeremy Corbyn looga adkaado doorashada toddobaadka xiga ka dhaceysa UK, sababtuna ay tahay eedeymo ku saabsan Yahuud naceybka ee la degay hoggaamiyaha xisbiga Labour-ka.
Shirkii NATO oo lasoo gabagabeeyay
Hogaamiyayaasha gaashaanbuurta NATO ayaa soo gaba-gabayey shir madaxeed labo maalin uga socday duleedka London, waxaana ay soo saareen war-murtiyeed ay ku midaysan yihiin.
Samafale u dhashay Japan oo lagu dilay Afghanistan
Erdogan oo difaacay heshiiska badda ee ay la galeen Libya
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta ku gacan seeray dhalleeceymaha loo jeedinayo heshiis ay la galeen Libya oo Aknara u ogolaanaya inay hesho xuquuqda dhul-badeed baahsan, oo sidoo kale ay raadinayeen dalal ay ka mid tahay Greece.
Dhaqaalaha Turkiga oo sare u kac sameeyey
Dhaqaalaha Turkiga ayaa kordhay 0.9% rubacii saddexaad ee sanadkan, marka loo bar-bar dhigo sanad ka hor, taasi oo soo geba-gebeysay saddex rubac oo hoos u dhac xiriir ah.
Ra'iisal Wasaaraha Ciraaq oo Is-casilay
Isaga oo tixraacayay qodobka 76 ee dastuurtak dalkaasi, ayuu afhayeenka baarlamaanka Mohammad al-Halbusi Axadda maanta ah sheegay, in madaxweyne Barham Saleh uu weydiisan doono xisbiga ugu weyn baarlamaanka in uu soo magacaabo Ra’isulwasaare cusub
Erdogan oo Weeraray Emmanuel Macron
Iyadoo todobaadka danbe ay madaxda dalalka xubnaha Isbaheysiga NATO ku ballansanyihiin dalka Britain oo ay ka dhici doonto munaasabadda 70-sano-guuradi aas-aaska isbaheysiga, ayaa madaxweynaha Turkiga Erdogan uu Jimcihii hadallo kulkul ku weeraray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron
Maalinta garab-istaagga Falastiin oo la xusayo
Ciidamada Ciraq oo dilay 13 dibad-baxayaal ah
Ciidamada ammaanka Ciraq ayaa maanta toogasho ku dilay ugu yaraan 13 qof oo dibad-baxayaal ah, magaalada Koonfureed ee Nassiriya, sida ay sheegeen ilo-wareedyo caafimaad.
Mintidiin ku lug lahaa weerarkii Dhaka oo dil lagu xukumay
Maxakamadda u gaar ah falalka argagixiso oo ku taalla dalka Bangladesh ayaa dil toogasho ku xukuntay toddobo xubnood oo ka tirsan koox mintidiin Islaami ah oo dalkaas laga mamnuucay.
China oo u yeertay safiirka Mareykanka
Wasaaradda arrimaha dibedda China ayaa Isniintii u yeertay safiirka Mareykanka Terry Branstad, si ay cabasho uga muujiso sharci uu ansixiyey Congress-ka Mareykanka oo lagu magacaabo Sharciga Xuquuqda Aadanaha iyo Dimoqraadiyadda Hong Kong.